Isikhathi Iposi: 06-03-2021
Senza futhi ucwaningo lwe-PCR, kungani imiphumela ihlale imbi kakhulu kuneminye? E-laboratory, bheka i-PCR yabanye abantu, ukusebenza kahle kwe-amplification kuphezulu, umucu we-electrophoresis uphelele, futhi ubheke okwabo, okunzima ukukwenza isikhathi eside, uzwe ukusabela kuhle kakhulu, i-res ...Funda kabanzi »
Ungazikhetha kanjani izinto ezisetshenziswayo zelebhu ye-PCR (2)
Isikhathi Iposi: 06-01-2021
Ungazikhetha kanjani izinto ezingasetshenziswa kulabhorethri ye-PCR (2) Ukusabalala kobhadane lomqhele omusha kwezinye izindawo sekuyindaba ekhathaza wonke umuntu. Ukutholakala kwe-coronavirus entsha njengamanje isebenzisa kakhulu indlela ye-PCR ye-fluorescent, kanye nesikhathi sokuqedwa kwe-nucleic acid test r ...Funda kabanzi »
Ungazikhetha kanjani izinto ezisetshenziswa ku-PCR laboratory (1)
Isikhathi seposi: 05-26-2021
Kusukela ubhadane lomqhele olusha, ukuhlolwa kwe-nucleic acid sekutholwe kakhulu, futhi nesidingo samalabhorethri e-PCR naso sikhuphukile. Namuhla, ngizokwethula ikakhulukazi ukuthi ngikhetha kanjani izinto ezisetshenziswayo zelebhu ye-PCR. Okokuqala, sidinga ukucacisa ukuthi yiluphi uhlobo lwesilingo se-PCR esikwenzayo. ...Funda kabanzi »
Uwakhulisa kanjani amabhaktheriya esitsheni sepulasitiki iPetri?
Isikhathi Iposi: 05-20-2021
Uwakhulisa kanjani amabhaktheriya esitsheni sepulasitiki iPetri? 1. Hlanza izitsha ze-petri, uzigoqe ngephepha le-kraft noma nge-gauze, uzifake inzalo ku-autoclave ngo-121 ℃ okwemizuzu engama-30. 2. Chaza isampula ngosawoti oyinyumba ojwayelekile, faka i-1ml diluent esitsheni se-petri, bese uthele endaweni yokuhlanza ...Funda kabanzi »
Ukuntuleka kwamathiphu amancane we-pipette kuletha inkinga enkulu kusayensi
Isikhathi Iposi: 05-14-2021
Ithiphu yepipette ethobekile incane, ishibhile, futhi ibalulekile kwisayensi. Kukhuthaza ucwaningo ngemithi emisha, ukuxilongwa kweCovid-19, nakho konke ukuhlolwa kwegazi emlandweni. Kepha manje, ngenxa yokuphela kukagesi, imililo, nezimfuno ezihlobene nobhubhane, uchungechunge lokuphazamiseka okungazelelwe kuxhaxha lokunikezwa kwethiphu le-pipette lune-c ...Funda kabanzi »
2020-2026 Global Pipette and Pipette Skills Market, Processing Manufacturing and Industry Trend Outlook ngeSifunda, Uhlobo, Isicelo kanye ne-Forecast
Isikhathi Iposi: 05-13-2021
"I-Global Pipette and Pipette Techniques Market Report" ihlaziya ngokucophelela zonke izici zemakethe, kufaka phakathi usayizi wemakethe, izindawo ezinkulu zokumaketha, abadlali abakhulu, izinkampani ezinkulu, ukwakheka kwemakethe, ukuhlukaniswa kwemali, ukuqoqwa kwemali engenayo, ukufunwa, i-R & D necebo eliphezulu lokumaketha. I-P ...Funda kabanzi »
Ngabe kuzoba khona izinkinga ezibuhlungu ngemuva kokuhlolwa kwe-nasal swab Covid-19?
Isikhathi Iposi: 05-12-2021
Ngo-Ephreli 29, 2021, emtholampilo wendawo eGaza City, insizwa yasePalestine yasabela. Umsebenzi wezempilo ubeqoqa amasampula amaswabi acinene ayohlolwa i-coronavirus. Ukuvela kokwehluka okutheleleka okwedlula konke okwenzeka eBrithani ngenyanga edlule kusibhebhethekisile lesi simo, okwenze kwanda nokwanda kwamacala ngo-amon ...Funda kabanzi »
Ungawasebenzisa kanjani amaslayidi wesibonakhulu
Isikhathi seposi: 03-30-2021
1. Indlela ye-Smear iyindlela yokwenza amafilimu esabalalisa ngokulinganayo ukwaziswa okuku-slide. Izinto ze-Smear zinomzimba owodwa weseli, ulwelwe oluncane, igazi, uketshezi lwesiko lamagciwane, inhlangano evulekile yezilwane nezitshalo, ama-testis, anther njalonjalo. Qaphela lapho uthatha i-smear: (1) Isilayidi kufanele sihlanzeke. (2) uSli ...Funda kabanzi »